Eto izahay izao ary vonona ny hiasa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2019 3:10 GMT
Ankizivavy mpikatroka avy any Kyrgyzstan aho.
Nino aho ary mino ankehitriny fa afaka manova ny tontolonay aho, na dia tsy mora aza izany, kanefa afaka manao izany aho ary hanao izany, tiako ny hahatonga ny zazavavy tsirairay ho afaka, hahazo fahalalana, salama, matanjaka ary sambatra.
Miezaka manao ny tsara indrindra mba hahatonga izany ho tanteraka ny vondrona misy anay . Manao izany ny ankizivavy rehetra, angamba mety tsy mahalala ny momba izany fotsiny izy .
Tianay ho re ny feonay. Zava-dehibe ho anay raha izahay ihany no manoratra ny tantaranay. Satria manakipy ny masony amin'ny zava-mitranga ny fiarahamonina. Mila ankizivavy maro kokoa avy amin'ny tanàndehibe sy tananakely ao Kyrgyzstan izahay hanoratra ny tantarany, ka ny Rising Voices no hanampy anay betsaka amin'izany. Mandefa izany ao amin'ny bilaoginay devochkiaktivistki.kloop.kg ankehitriny ireo zazavavy avy any amin'ireo tanànakely hafa, na tanàndehibe, ary ny tovovavy rehetra izay te-hanoratra ny tantarany.
Misaotra indrindra ny Rising Voices izay nanampy anay hahatanteraka izany !! Ankehitriny, manakaiky kokoa ny tontolo tsy misy herisetra, lavitry ny tsy rariny, lavitry ny fankahalana ary lavitry ny fanavakavahana izahay.